Ku soo dheji Jadwalka Excel si aad u hesho AutoCAD ama Microstation - Geofumadas
Mee, 2008 AutoCAD-AutoDesk, IntelliCAD, Microstation-Bentley
Taas micnaheeda ma ahan inaan soo dejiyo xogta, taas waan la hadalnaygacanta; Hadda waxaan ka hadlayaa soo dhejinta miis dhamaystiran oo leh qoraallada la isku habeeyey ee unugyada, sawirada la geliyey iyo qaababka gaarka ah ee Excel, oo leh kala duwanaansho kala duwan iyo waqti isku mid ah ayaa la cusbooneysiin karaa labada dhinacba.
Markii hore, in la sameeyo miisaska AutoCAD, walxaha fudud ee qalabka, khadadka iyo qoraallada kaliya ayaa la isticmaalay; Jirdil oo aynu dhammaanteen wax badan u xanuunsano, laga bilaabo version 2005 AutoCAD waxay isku dhafeen karti ay ku shaqeeyaan miisaska jilicsan.
Isticmaalka ugu badan ee tani waxay badanaa ku jirtaa liiska milkiilayaasha khariidadaha, waraaqaha shaqada ee qorshayaasha qaab-dhismeedka, liistada agabka ama faahfaahinta qorshooyinka u baahan miisaska xog badan oo badan. Faa'iidada ah inaad awood u yeelatid inaad sidaan ku sameyso Muuqaalka iyo ku-haynta dib-u-cusbooneysiinta waxaa ka jira mid aad u qiimo badan
Waxaan doonayaa inaan ku tuso Awoodi karo, qalab aan ahayn keliya oo la shaqeeya AutoCAD laga bilaabo 2000 ilaa 2008, laakiin sidoo kale waxaa jira MicroStation V8.0 ama ka sareeya, Bricscad, ProgeCAD y Cadopia. Marka la eego shaqadu waxay ina xusuusineysaa markii Lotus 123 uu hirgeliyey WYSIWYG ka hor inta Excel la yimaado, "AutoTable" waxay dhiirrigelisaa "Waxa aad ku aragto Excel waa waxa aad ku hesho CAD".
Aan aragno astaamaha:
Tan iyo markii AutoCAD horey u qabatay, waxay noqon lahayd mid xiiso leh in la ogaado waxa AutoTable sameeyo in AutoCAD 2008 uusan samayn:
1. AutoTable waxay u shaqeysaa si dhakhso ah
Badhanka ayaa mar hore loo sameeyay, sidaas darteed isla markiiba waa soo dejin; waxaa laga soo cusbooneysiin karaa Excel si AutoCAD ama si kale. Sidoo kale "cusbooneysiinta" waa mid deg deg ah, kantaroolka waddooyinka khadadka ah way ka fiican yihiin, sida kiiska marka xogta lagu keydiyo gudaha intranet.
2. AutoTable waxay ogolaataa ikhtiyaarka in ay soo dejiyaan kala duwanaanta
Ma aha oo kaliya miiska oo dhan ma yimaadaan, haddii aad doorbido inaad soo dejiso oo keliya unugyo kala duwan oo kuwani waxay ku jiri karaan xaashiyo kala duwan oo ah foormka Excel.
3. AutoTable waxay ku ilaalisaa xakameyn fiican
Waxaad qeexi kartaa ikhtiyaarka miiska uu ku yimaado xuduud la'aan ... ah, waxay taageertaa dhammaan noocyada xuduudaha sida xariijin laba jibbaarane ah ama xariiqa xagasha.
Waxaad sidoo kale xakameyn kartaa sifooyinka unugyada sida midabka buuxsan, midabka xuduudaha, nooca qoraalka, cabbirka iwm, waxaad xitaa ku qori kartaa nooca kala duwan ee font warqadda gudaha unugyada isku midka ah. Tani ma aha mid aad u fiican AutoCAD, waxaan u maleynayaa inay sidoo kale qiimo badan tahay inaad u kala saari karto jadwalka miiska (unicode) xitaa taageeraya astaamaha xisaabta.
Marka taasi la sameeyo la AutoCAD 2008 wax walba oo ku yimaado sifooyinka loo siman yahay, waxay ku siin karaan characters qaar ka mid ah mana xukumi karno width saxda ah oo ka mid ah tiirar ama saf height.
... xitaa waxaad dooran kartaa lakab halkaas oo aad ku soo koobi karto waxyaabaha miiska iyo miisaanka aad rabto inaad soo dejiso.
4. Wax kastoo keena !!!
Haddii ay jiraan muuqaalo asaasi ah miiska (sawirada laga sameeyey Excel) waxaa loo keenay iyaga oo na yaabaya ... sidoo kale wuxuu keenaa sawirrada iyo sawirada la geliyey miiska.
5. Sida haddii ay ahayd Excel
Si aad wax uga beddesho qoraalka miiska, waxaad samayn kartaa "F2", sida haddii aan ku jirnay Excel. Xitaa waxaad soo dejin kartaa qaybaha kala duwan ee waraaqaha shaqada hal buug-yar oo Excel ah.
Waxaan u maleynayaa in qalab quruxsan anfacaya waxana ay hagaajin kartaa wax soo saarka, qiimaha kala duwan yihiin iyada oo ku xiran version of AutoCAD, Microstation ama IntelliCAD iyo u isticmaali karaa sida liisanka sabayn ... in uu yahay, ma mashiinka hal loo xilsaaray laakiin rakibi karo on server a oo ay isticmaalaan dadka isticmaala kala duwan.
Waxaan u maleynayaa in shirkad, haddii ay maalgeliso in ka badan $ 3,000 ee AutoCAD, wax dhibaato ah ma lahaan doonto inay ka fikirto haddii ay ka faa'iideysaneyso. Arrintaas, ruqsadda loogu talagalay AutoCAD LT waxay ku kacaysaa $ 149, iyada oo sicir-dhimis haddii hal ka badan la iibsado.
Halkan ayaan ka tagaa isku xirka Awoodi karo, sidoo kale waad awoodi kartaa download ee tijaabada ah ee loogu talagalay maalmaha 30.
Post Previous«Previous 7 waxa ay la yaaban tahay, wax walbo oo dhan waxay ku noqdaan caadi
Post Next Trimble wuxuu GeoXH billaabay wakhti sax ah oo sax ahNext »
2 Jawaab ah in "Dib loo soo dhejiyo Jadwalka" AutoCAD ama Microstation "
sidee baan u soo dhejinayaa miisaaniyadaha Excel MicroStation SE ama J, madaama aan haysto nooca shatiga ah ee kaliya.
jose damiya isagu wuxuu leeyahay:
Barnaamijkan waa mid aad wax ku ool ah, sidoo kale waxaa fiican in u qabtay AutoCAD, tan iyo autodesk amarka autocad miiska uu leeyahay dhibaatooyin badan oo aan awoodin in ay iyaga xal u.